ITheku Lilwa nokubhebhetheka kwecorona emijondolo nasemahostela – Sivubela intuthuko Newspaper
Kufakelwe amathangi amanzi nezakhiwo zangasese emijondolo engenazo ukulwa nokubhebhethela kwegciwane I corona
NJENGOBA umhlaba wonke ubhekene negwadla yokusabalala kwegciwane icorona, uMasipala weTheku usuthathe izinyathelo ezinqala ukugwema ukubhebhetheka kwaleligciwane. Lezinyathelo zibala ukuhlinzeka abahlali ngamathangi amanzi emijondolo engenazo izakhiwo zangasese. Umasipala uphinde ube nohlelo lokuhlanzwa kwezindawo ezinjengamahostela, izindawo zasemjondolo, amahhovisi abahwebi abasafufusa kanye namarenki ukuqinisekisa inhlanzeko.
Ngaphandle kwezindlu zangasese, uMasipala uphinde wafakela insipho kanye nezibulali magciwane kulezindawo. Ngokusho komnyango wezempilo ne World Health Organization, kubalulekile ukuhlanza izandla Kanye nenhlanzeko endaweni ohleli kuyona. “Ngaphandle kokungabaza, izimpilo zabahlali bethu ziyohlala zibalulekile kakhulu,” kusho oyimeya yalomkhandlu ukhansela Mxolisi Kaunda.
Imeya iphinde yanxusa abahlali baseThekwini ukuba bathobele imithetho ebekwe umongameli wezwe uCyril Ramaphosa yokuba bangaphumeli ngaphandle nokuzigcina behlanzekile ngasosonke isikhathi kanye nokuqhelelana. “Ngaphansi kobuholi bami, idolobha kufanele lithobele umthetho, ukwehluleka ukwenza lokho kungaholela ezigamekweni eziningi zokuthelelana ngalesisifo kanti kungabe kungasahambisani nesinqumo esithathwe uhulumeni wethu,”kubeka uKaunda.
Itheku linemijodolo engaphezu kuka 590. Ngaphandle kokusiza abahlala emijondolo nasemahostela, itheku liphinde lavula izindawo lapho kugcinwe khona abahlala emgwaqweni. Zibalelwe ku -11 izindawo ezikhona okubalwa izindawo ezigcine abesilisa, abasesifazane nezingane kanye nalaba abalwisana nezidakamizwa.
Abahlala emijondolo bayishayele ihlombe imizamo yeTheku ukulwisana naleligciwane. Bathi izindawo zasemijondolo izona ezinenkinga kakhulu ngenhlanzeko. Bathi kuzoba nzima ukuqhulelelana njengoba izindlu zabo ziqhelelene. Imeya inxuse ukuba kube nokubambisana ekulweni naleligciwane.